ဖွံ့ထွားလှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှလေးကို အထင်းသားပေါ်လွင်အောင်ပြသထားတဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ဖွံ့ထွားလှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှလေးကို အထင်းသားပေါ်လွင်အောင်ပြသထားတဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
By Cele MinPosted on January 12, 2021 January 12, 2021
ပါးချိုင့် လေးနဲ့ ရယ်လိုက် တိုင်း ပုရိသတွေ ကို တဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေအောင် ဖမ်းစား ထားနိုင်သူလေး ကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ချောလေး အေးမြတ်သူ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ ဟာ Gym ကို ကြိုးစားပမ်းစား ဆော့ကစားသူ ဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်လုံးလေး က ကျစ်ကျစ် လစ်လစ်လေး နဲ့ အသည်းယား စရာကောင်းလွန်း နေတာလည်း ဖြစ် ပါတယ် ။ မမြတ်လေး ဟာ ဆယ်ကျော်သက် ကောင်မလေး အလား ထင်မှတ် ရလောက်အောင်ကို နုပျို လှပလွန်းတဲ့ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ မင်းသမီး တစ်လက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ် … .
သူမ ဟာ ဟန်ဆောင်မှု ကင်းပြီး အရှိ ကို အရှိအတိုင်း နေထိုင် တတ်တဲ့ ပုံစံလေးတွေ ကြောင့် ပရိသတ် တွေက အရင် ကထက်တောင် ပိုပိုပြီး အားပေး လာကြတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု ရှိတိုင်း လည်း ပရိသတ် တွေကို ဝေမျှပေး လျက်ရှိပြီး ကျန် အားလပ်ရက် များကိုလည်း Gym ဆော့ တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေး တွေကိုသာ တင်ပေး နေတာ လည်း ဖြစ် ပါတယ် ။ မနေ့ည ကလည်း အေးမြတ်သူရဲ့ Instagram Story မှာ ဗီဒီယို လေးတွေ တင်ထား တာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဒါက တော့ အနောက်ပိုင်း အလှ တရားတွေ ကို ရင်သပ် ရှုမောဖွယ် ကောင်းအောင် သေသေ ချာချာလေး ရိုက်ပြထားတဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ မမြတ်လေး ဟာ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ဝတ်စုံလေး ကို ဝတ်ဆင် ပြီး အားကြိုး မာန်တက် လေ့ကျင့်ခန်း တွေ လုပ်နေတာ ကိုလည်း ဒီဗီဒီယိုလေး ထဲမှာ မြင်တွေ့ရမှာ ဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ် တွေလည်း ကြည့်ရှု ခံစား နိုင်အောင် မမြတ်လေး ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး ကို တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူ တင်ဆက် ပေးလိုက် ရပါတယ် နော် … .
source and photo crd : Myat Lay ’ s IG Account
ပါးခ်ိဳင့္ ေလးနဲ႔ ရယ္လိုက္ တိုင္း ပုရိသေတြ ကို တျဖဳတ္ျဖဳတ္ ေႂကြေအာင္ ဖမ္းစား ထားနိုင္သူေလး ကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး ေအးျမတ္သူ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ ဟာ Gym ကို ႀကိဳးစားပမ္းစား ေဆာ့ကစားသူ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကိုယ္လုံးေလး က က်စ္က်စ္ လစ္လစ္ေလး နဲ႔ အသည္းယား စရာေကာင္းလြန္း ေနတာလည္း ျဖစ္ ပါတယ္ ။ မျမတ္ေလး ဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေကာင္မေလး အလား ထင္မွတ္ ရေလာက္ေအာင္ကို ႏုပ်ိဳ လွပလြန္းတဲ့ ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ မင္းသမီး တစ္လက္ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ … .
သူမ ဟာ ဟန္ေဆာင္မႈ ကင္းၿပီး အရွိ ကို အရွိအတိုင္း ေနထိုင္ တတ္တဲ့ ပုံစံေလးေတြ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြက အရင္ ကထက္ေတာင္ ပိုပိုၿပီး အားေပး လာၾကတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈ ရွိတိုင္း လည္း ပရိသတ္ ေတြကို ေဝမၽွေပး လ်က္ရွိၿပီး က်န္ အားလပ္ရက္ မ်ားကိုလည္း Gym ေဆာ့ တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေနတဲ့ ဗီဒီယိုေလး ေတြကိုသာ တင္ေပး ေနတာ လည္း ျဖစ္ ပါတယ္ ။ မေန႔ည ကလည္း ေအးျမတ္သူရဲ့ Instagram Story မွာ ဗီဒီယို ေလးေတြ တင္ထား တာပဲ ျဖစ္ ပါတယ္ ။
ဒါက ေတာ့ အေနာက္ပိုင္း အလွ တရားေတြ ကို ရင္သပ္ ရႈေမာဖြယ္ ေကာင္းေအာင္ ေသေသ ခ်ာခ်ာေလး ရိုက္ျပထားတဲ့ ေအးျမတ္သူရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလး ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ မျမတ္ေလး ဟာ ေပါ့ေပါ့ ပါးပါး ဝတ္စုံေလး ကို ဝတ္ဆင္ ၿပီး အားႀကိဳး မာန္တက္ ေလ့က်င့္ခန္း ေတြ လုပ္ေနတာ ကိုလည္း ဒီဗီဒီယိုေလး ထဲမွာ ျမင္ေတြ႕ရမွာ ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ပရိသတ္ ေတြလည္း ၾကည့္ရႈ ခံစား နိုင္ေအာင္ မျမတ္ေလး ရဲ့ ဗီဒီယိုေလး ကို တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ကူးယူ တင္ဆက္ ေပးလိုက္ ရပါတယ္ ေနာ္ … .
Previous post မင်းသမီးကြီး မို့မို့မြင့်အောင်တောင် ရင်ထဲ ဆို့နင့်တဲ့အထိ ခံစားသွားရတဲ့ မိုးအောင်ရင်ရဲ့ စကားတစ်ခွန်း
Next post ပုရိသတို့မျက်လုံးပြူးသွားအောင် ရုတ်တရက်ရင်နှစ်မွှာကို လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ XMUE XMUEရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို